विचित्र संसार :: Nepal Post Dainik विचित्र संसार | Nepal Post Dainik
✍️लक्ष्मण साह ।हिन्दुहरुको मात्र नभई संसारका सबै धर्मावलम्बीहरु र नेपाल देशका लागि मात्र नभई संसारका सबै देशहरुको महान चाड हो "लकडाउन"। यो कुनै तिथिमिती अनुसार मनाइने चाड होइन। कुनै पनि देशको सरकारको चाहना अनुरुप मनाइने थप यता
२५ फाल्गुन । संसारका कैयौँ देशमा जलीय जीवहरूको वर्षा देखिएका छन् । यस्ता घटनाले मान्छेलाई भयभीत तुल्याउँछन् भने वैज्ञानिकहरूलाई नयाँ तरिकाले सोच्न विवश पार्छन् । अमेरिका, जापान, भारत आदि देशमा बेला–बेला माछाको वर्षा भएको थप यता
मस्को । रुसमा लामो समयसम्म आफ्नै बावुबाट बलात्कृत भएपछि तीन दिदीबहिनीले बावुको हत्या गरेका छन् । क्रेस्टिना, एन्जेलिना र मारिया खचतुर्यानले बावुलाई चक्कु प्रहार गरेका थिए । छोरीहरुको आक्रमणबाट घाइते भएका बावु मिखाइलको थप यता
एजेन्सी सुन्दैमा अनौठो र अपत्यारिलो लाग्ने । के छोरा वा छोरी जन्मिने भन्ने कुरा पनि ठाउँले फरक पार्छ र ? सायद पार्दो रहेछ कि । त्यहीँ भएर युरोपको एउटा गाउँमा सधैं छोरी मात्रै जन्मिने गरेका छन् । उक्त गाउँमा पछिल्लो ९ वर्षयता थप यता
एजेन्सी कोही मानिसका आकांक्षाहरु विचित्रकै हुन्छन् । अहिले एकजना ४९ वर्षकी महिलाको बिहेको कहानी निकै चर्चित बनेको छ । पूर्व स्विमसूट मोडेल एलिजाबेथ होडले आफ्नै कुकुरसँग बिहे गरेकी छिन् । उनको कुकुर लोग्नेको उमेर ६ वर्षको थप यता
भारत । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित एक गाउँमा रक्सीले मातेका एक पुरुषले जुवा हारेपछि आफ्नै पत्नीलाई बलात्कारको लागि साथीहरूलाई सुम्पिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । रक्सीले मातेका ती पुरुषले साथीहरूसँग पहिले नै गोप्य रुपमा आफ्नी थप यता
यस्तो विचित्रको रुख छुँदा काउकुती लाग्ने
एजेन्सी के तपाईंले काउकुती लाग्ने रुखका बारेमा सुन्नुभएको छ ? सायद छैन होला । भारतको उत्तराखण्डस्थि कालाढुंगी जंगलमा यस्तो विचित्रको रुख छ, जसलाई मुसार्दा काउकुती लाग्दछ । मान्छेलाई जस्तै रुखलाई पनि काउकुती लाग्दछ भन्ने थप यता
एजेन्सी आफ्नै पत्नीलाई काँधमा बोकेर दौडिनुपर्ने प्रतियोगिता पनि दुनियाँमा कहीँ होला ? तर हुँदो रहेछ । अझ यस्तो प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले आफ्नै पत्नीको जिउको वजन बराबरको वियर पुरस्कारको रुपमा पाउँछ भन्दा झनै अनौठो लाग्ला थप यता
भारत, १५ असार । भारतको नयाँ दिल्लीको एम्स अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर प्रिया बेदीले आफ्नो श्रीमानले शारिरिक सम्बन्ध नराखेको भन्दै आत्महत्या गरेकी छिन् । उनको विवाह ५ वर्षअघ डाक्टर कमल बेदीसँग भएको भए तापनि श्रीमान् समलिङ्गी थप यता
छोरी बलात्कार गर्दै आएका भौतिक मन्त्रालयका उपसचिव पक्राउ
काठमाडाैँ, २८ जेठ । आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव पक्राउ परेका छन् महोत्तरीका स्थानीय ललितपुर धोविघाट बस्दै आएका उनले छोरीलाई विगतको वर्षदेखि बारम्बार बलात्कार गर्दै थप यता